Masinina manisy marika
Ny vatan'ny Concrete Vibrator izay malaza amin'ny eropeana
Ry mpanjifa malala, mpanamboatra milina fanamboaran-dàlana izahay. Ary izao fotoana izao dia afaka mahita mpampiasa manokana bebe kokoa momba ilay vibrator simenitra isika. Ka mba te hanana fampidirana fohy fotsiny ho an'ity karazana milina ity izahay. Ireo vatan-kazo vibrator vita amin'ny simenitra dia manana ireto manaraka ireto: 1) Manaiky ny o ...
Craft vaovao ho an'ny paompin-drano amin'ny lamaody any Aostralia
Water Pump dia manome fahombiazana miavaka amin'ny fampiharana paompin-drano amin'ny ankapobeny. Na ho an'ny fanadiovana adidy mavesatra izany, fanondrahana zaridaina na famoahana lakaly tondra-drano. Ireo vokatra ireo dia manana fitoeran-tsinga fanampiny. Ny fitoeran-tsolika 2L lehibe kokoa dia midika hoe afaka mihazakazaka mandritra ny adiny roa amin'ny iray ...
Ny maodely vaovao misy motera perkins izay malaza any UK
Ny orinasanay dia nifantoka foana tamin'ny fandrosoana sy ny fampandrosoana niaraka tamin'ny antsipirian'ny masininay. Izao fotsiny izahay te-hanatsara ny fontsika milina fa ho an'ny maotera maotera ho an'ny faritra bebe kokoa. Ny motera Perkins avy any Angletera, satria fantatsika rehetra fa ny maotera yanmar dia miteraka fihenan'ny feo ary manao herinaratra kely koa ...
Nahita lalana vita amin'ny beton tany Dust Control ho an'i Angletera
Mba hifanaraka amin'ny tontolo iainana isan-karazany any Angletera, ny orinasanay dia mahazo milina fanao iray vaovao mifanaraka amin'ny filanao fotsiny. Ny tsofa diamondra ho an'ny beton dia matetika lasakan'ny laser, izy ireo dia natao ho an'ny fanapahana lena satria mazàna no mafy na manimba. Raha ny lelany ...
Mini excavator amin'ny fampiroboroboana sy kojakoja maimaim-poana ho an'ny mpanjifa vaovao any Frantsa
Ankehitriny dia miha malaza amin'ny fambolena sy ny zaridaina manokana ilay mpikaroka bitika kely. Azontsika jerena eto ny pitsopitsony momba ny fanohanana. 1. Tsara sandry. Ny sandry swing dia miankina amin'ny paompy hydraulic iray, fa ny andiany CXA, CXB rehetra dia manana an'io firaketana io. Miaraka amin'ireo ampahany ireo, ny Arm ca ...
Ny plate compactor izay malaza any Romania dia manome fahafaham-po ny fenitra UE rehetra
Eo am-pananganana dia misy karazany telo lehibe ny compactor: ny lovia, ny rammer, ary ny roller ny arabe. Ary Ace-masinera nifantoka tamin'ny rammer sy lovia, anio dia te-hanao fampidirana fohy momba ny compactor plate fotsiny izahay. Any Angletera, ny anarana hoe "wacker plate" na "wacker ..."
Ny fitoeran-jiro lavitra lavitra miaraka amin'ny tombony.
Miaraka amin'ny fampivoarana ny teknika, ankehitriny ny masinina dia manana maodely marani-tsaina ary indraindray dia afaka manolotra ny fampiasana tsara kokoa noho ny mahazatra. Izao ny orinasanay dia manamboatra milina vaovao iray fotsiny amin'ny fanamboaran-dàlana. Iray karazana fampandriana herinaratra io. Toa hafa kely ihany izy amin'ny masininay mahazatra wh ...
Power Trowel ireo vokatra malaza amin'ny milina fanamboaran-dàlana.
Ny fitoeran-tsinay dia mameno ny fari-taninay amin'izao fotoana izao amin'ny fomba tsara, mampifandray ny dingana rehetra manomboka amin'ny fametahana ny tany mankany amin'ny gorodona vita amin'ny beton, ary mifanentana tsara amin'ny paikadim-pirazanana ataontsika mba hampitomboana ny orinasa Concrete Surfaces sy Floors. Miaraka amin'ny fanampiana ireo trowels mitaingina dia hanana comp ...
Paompy amin'ny rano ny safidin'ny motera ary aseho ireo vokatra
Ny paompy dia fitaovana mampihetsika ny tsiranoka (ranoka na gazy), na indraindray misavoana, amin'ny alàlan'ny hetsika mekanika, matetika novaina avy amin'ny angovo elektrika ho lasa angovo Hydraulika. Ny paompy dia azo sokajiana ho vondrona lehibe telo araka ny fomba ampiasainy hamindrana ny tsiranoka: fananganana mivantana, famindrana, ...
Ny tantara sy ny karazana mixeur Concrete
Ny mixer vita amin'ny beton (antsoina matetika hoe mixer simenitra) dia fitaovana iray izay manambatra ny simenitra, mitambatra toy ny fasika na vatokely, ary rano ho lasa beton. Ny mixer beton mahazatra dia mampiasa amponga mihodina hampifangaro ireo singa. Ny iray amin'ireo mixer vita amin'ny beton voalohany novolavolaina tamin'ny 19 ...
Fampidirana ho an'ny Mini Excavator hanao ny Asa Tsara Kokoa
Ny mpitrandraka kely matetika dia tian'ny tranonkala asa miaraka amin'ny efitrano tery, afaka mandeha any amin'izay tsy azon'ny milina lehibe kokoa. Ny excavator kely dia mety amin'ny asa any an-tokontany, ao anaty trano ary manodidina ny fefy handavaka, hampiakarina ary hanadiovana. I DIGGER Misy siny mahazatra mandavaka ny tany amin'ny tanjona maro, ...
Concrete Mixer dia tokony hanome fahafaham-po ny filan'ny mpampiasa farany
Nandritra izay taona 2020 lasa izay, ny mixer vita amin'ny beton no vokatra amidy ambony indrindra amin'ny orinasanay, ary afaka manolotra ny habe samihafa amin'ny Mini (80L) ka hatramin'ny kamio (4.3 CBM). Ary ny mpanjifanay rehetra dia te hanao asa tsara kokoa fotsiny. Amin'ny maha mpamatsy azy dia miankina amin'ny akora sy ny asa-tanana tsara ny vokatra. Ka ao ...